Garoonka » admin
You are here:Home admin	List/Grid	Author Archives: admin	Daawo Sawirrada: Magaalada Baydhaba oo Ka Furmay Cayaaro Iyo 30 Kooxood oo Ku Tartamaysa
Magaalada Baydhabo ee Caasimada Koonfur Galbeed waxaa ka furmay cayaaro loogu magacdarey koobka is dhaxgalka bulshada Baydhabo Janaay,waxaana ku har damaya ilaa 30-kooxood oo ka dhisan gudaha magaalada Baydhabo,iyadoona Gudiga… Read more »
GUDDIGA OLOMBIKADA KONFUR GALBEED SOMALIYA OO WEBSIDE CUSUB FURAY. (www.southwestsomaliolympiccommittee.com) FIFA Hambalyo u soo dirtay hogaanka cusub ee XKC Soomaaliya
Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Aduunka ee (FIFA) Joseph S. Blatter ayaa Hambalyo u soo diray madaxweynaha cusub ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ee shalay Muqdisho lagu doortay Cabdi Qani Siciid… Read more »
Maalinimadii Axadda ahayd ayaa Waxaa duco iyo baroor diiq loogu same eyey labada marxuum ee kala ah Macalin Dahir Gacameey iyo Abdulkadir Isoo Mareey, magaalada Manchester. Tacsidan ducada ah ayaa… Read more »
Waxaa dhammaan BAHDA SPORTIGA AMA Jaalliyadda SPORTIGA ee ku nool DALKA Ingiriiska lagu ogeysiinayaa in maalinimada Axadda OO AY bisha Agosto tahay 31.08.2014, lagu qaban doono barnaamij loogu ducayn doono… Read more »
Maalinimadii shalay ayaa tartan cayaar kubadda ah laga FURAY magaalada Baydhabo. TARTANKA OO AY ka QAYB Galen ilaa iyo 12 kooxood, ayaa Waxaa qabanqaabiyey xiriirka kubadda CAGTA ee Koonfur GALBEED… Read more »
Waxaa maanta OO Axad ahayd 24.08.2014 ka dhacay magaalada London, xaafadda Streatham tartan kubadda cagta ah OO loogu tala galay horumarinta dhalinyarada SOO koreysa. Tartankan Waxaa abaabulay kooxda MUQDISHO FC…. Read more »
Waxaa xalay magaalada barakaysan ee Makkah Sacuudi Arabia ku geeriyooday Macallin Daahir Gacameey OO ahaa halyeey, rug caddaa, macallin sport. Marxuumka OO Illaaheey nasiib Uga dhigay in uu ku geeriyoodo… Read more »
WAxaa maanta OO Jimco ahayd magaalada London laguaasay marxuum Abdulkadir Huseen Bootaan Isoo Mareey, Ilaaheey ha u naxriisto marxuumka. Waxaa duugta ka QAYB galay dhammaan BAHDA SPORTIGA ee DALKA Ingiriiska… Read more »
Shirka Waxaa furay Guddoomiyaha naadiga Moss Side SC, Iasgoo warbixin koobka ka bixiyey wax qabad kooxda iyo wixii AY ku guulaysteen iyo waxa u haray. Ka dib xubnaha kale ayaa… Read more »
1 / 2912345Next »	*Powered By - Google.Com*